ထက်အောင်ကျော်| December 8, 2012 | Hits:1
| | ကြွေလွင့်သွားသော ကြယ်ပွင့်များ
အဖွဲ့ခွဲ တည်ထောင်တဲ့ ရဲဘော် နှစ်ဦး ABSDF က ထုတ်ပယ်ရန်ပုံငွေအတွက် ကားပါမစ် ယူခဲ့ကြောင်း ABSDF ပြောအနုတ်လက္ခဏာကနေ သုညအဆင့်ဆီ ပြန်ရောက်လာတဲ့ အပြောင်းအလဲသူပုန်ကျောင်းသား တဦးရဲ့ ပြည်တော်ပြန် ခရီးစဉ် (နိဂုံးပိုင်း)အင်အားစု စုံညီ ညီလာခံ ကျင်းပရန် ABSDF တိုက်တွန်း
မောင်ပျာလောင် December 8, 2012 - 12:35 pm စာအုပ်အဖြစ်ထုပ်ဝေသင့်ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံများ မြေပုံများ နှင့် တီးဖြတ်သူအဖွဲ့ ဖြင့်
Reply Nyi Nyi December 8, 2012 - 6:14 pm ဆောင်းပါးအားလုံးစုပေါင်းပြီး စာအုပ်အဖြစ်ထုတ်ဝေပေးပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ခင်ဗျား ။
Reply အောင်မိုး (ကနေဒါ) December 9, 2012 - 10:46 pm ကိုထက်အောင်ကျော် နှင့်
Reply Sam Tun December 10, 2012 - 11:44 am I felt pain and many mixed feelings for everyone. For the write, really great job. Thanks.
Reply အပြင်လူ December 10, 2012 - 8:04 pm ရိုးရိုးသားသား ခန့်မှန်းပြောကြည့်မယ်နော်. စိတ်တော့ မဆိုးကြနဲ့ဗျို့။
Reply A member of 201 Bat. December 11, 2012 - 9:42 pm Dear A-pyin-lu,
Reply အပြင်လူ December 12, 2012 - 7:32 pm Really ? Then prove it !
Reply Mr Good December 28, 2012 - 6:10 pm Writer cover to N AB.so simple.be clever brother.
Reply မင်းကြီးညို December 12, 2012 - 5:36 am မျက်မှောက်ခေတ်ကာလမှာ ကျောင်းသားတွေက လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးလုပ်တယ်ဆို
Reply Mg Myint 24 December 28, 2012 - 6:39 pm Why dont oversea burmese(yebaw ye bat) cant help them?They have good car good job good home in third country.How can you think that government have to help them?Brother,please explain.Thanks.Eyyarwady News.I wanna see my post and reply.Trust You.Thanks
Reply ဘမောင် December 19, 2012 - 5:44 pm သူပုန်ကျောင်းသားတဦးရဲ့ မာရသွန်ခရီး (၅၀) နှင့် (၅၁) ကို
Reply Atwin Lu December 28, 2012 - 10:52 am How sad?Really feel sorry for them and their families.But,some of their friends(yebaw?) are having Xmas/New Year party at this time and talking about new car,house,job and drinking+smoking something…………And,thinking to go back MM & wanna makeagroup call RABLG(Return All Burmese Loser Group).Happy New Year to all.Thanks Ko Htet.
Reply A member of 201 Bat. January 16, 2013 - 4:18 pm တတိယ နိုင်ငံရောက် ရဲဘော်ဟောင်းတွေ ကားစီးတာ၊ စီးပွါးဖြစ်တာကတော့ သူတို့ကြိုးစား လို့ဖြစ်တာပဲ့လေ။ ပရိုပိုဆယ်ငွေနဲ့ ဖြစ်တာမှမဟုတ်ဘဲ၊